IMFUNDO NGEZESONDO UNCUTI GATWA UTYHILA UKUBA INDAWO YESIZINI YESI-3 IPHANTSE YANQUNYULWA - UKUHLEKISA
Imfundo yezesondo uNcuti Gatwa utyhila indawo ebalulekileyo ephantse yanqunyulwa ukusuka kwisizini yesithathu
NgoLwesihlanu ophelileyo ndibone ukubuya ekudala kulindelwe Imfundo yezesondo kwizikrini zethu emva kweenyanga ezili-18 kude, kwaye abalandeli abaninzi sele bebambe zonke iziqendu ezisibhozo kwimpelaveki.
Njengesiqhelo, la manqaku matsha aquka amagqabantshintshi aqaqambileyo ecaleni kokukhangela kwezesondo kwabakwishumi elivisayo, kwaye inkwenkwezi uNcuti Gatwa, odlala indawo kaEric Effiong, utyhile isigcawu esinye esiphantse sangayenza into yokugqibela.
Ngexesha lothotho, uEric uzimasa umtshato wosapho waseNigeria, oquka indawo ehlekisayo apho uAunty wakhe ephazamisa incoko malunga nelangatye elidala likanina ngesikhalo sokuba akazange anikwe isityu esaneleyo. Kwaye uGatwa wachaza Ezahlukeneyo ukuba kufuneka alwe ukuze ayeke lo mzuzu ekunqunyulweni.
Owu Thixo wam, ndingakuxelela into? Lo mbono uphantse wakhutshwa kulungelelwaniso, utshilo.
Umphathi wam wandithumelela umyalezo kwaye wayefana nokuthi, 'Baphantse bayikhupha irayisi,' kwaye ndambhalela umyalezo ndabuya ndathi, 'Nantoni na oyenzayo, qiniseka ukuba imizuzwana emihlanu ikulo mboniso. Kubalulekile! Wonke umntu waseAfrika, nokuba ungoweliphi ilizwe, uza kuyifumana loo nto kwaye kufuneka uyigcine apho! '
Olu luhlu lutsha luye lwadibana nempendulo evela kubo bobabini abalandeli kunye nabagxeki ukusukela ekubuyeni kwayo, uthotho olulandelayo u-Otis, u-Eric, Maeve, kunye nayo yonke iMfundo yezeSondo bephosa njengoko behlengahlengisa kulawulo olungqongqo lomphathi omtsha kaMordale, Ithemba Haddon (Jemima Kirke).
Uninzi lobuso obuqhelekileyo ukusuka kumaxesha onyaka amabini anesibini abuyile eza kujongana nobunzima obutsha bobudlelwane, ngelixa bekwadityaniswa nesamente ngobuso bobunye ubuso obutsha, kubandakanya uDua Saleh njengoCal, umfundi ongenguye owesibini kwi-Moordale.
Isondo leMfundo yezeSondo 3 ngoku isasaza kwiNetflix ngoku. Jonga i Uthotho lweNetflix kwaye Eyona midlalo bhanyabhanya yeNetflix ukukugcina ukonwabisa okanye undwendwele i- Isikhokelo seTV ezinye zibukele. Ndwendwela indawo yethu yedrama ngazo zonke iindaba zamva nje.
Ibhola ekhatywayo ihlala kwimidlalo yezulu
ps ndiyakuthanda ukulandelelana
obhale i-gavin kunye ne-stacey
colin morgan kunye nobradley james
Izinto ezintle kwi-amazon prime
ibali lesiporho ngekrisimesi